Talooyin muhim u tahay guul lagu Sida Freelancer Internet ah
About 75% dadka shaqeeya iyo lacagta samaynta shaqada online sidii wariyeyaasha madaxa madax bannaan, oo ay labada telecommute ka guriga ama heli assignments bixiyaa qaar ka mid ah shirkadda internetka iyo weli shaqeeyaan sida ay shuruudaha iyo awoodaha ay leeyihiin. Internet ayaa waxaa aad u suurtogal ah in naf dhibkeed shaqooyin in laga outsourced in shaqaalaha raqiis ah dalalka kale oo iyaga waa in la bixiyaa fursado processing bixinta online. Shirkado badan ee Maraykanka ayaa hoos u jarida on kuwa caadiga by tigidka canshuurta ugu badnaan shaqooyin ay shaqaalaha ee India iyo dalalka kale, oo aad hesho si aad u bixiso marayo PayPal ama qaar ka mid ah hababka kale bixinta internet. Dumar badan ee Maraykanka ayaa sidoo kale dhakhso noqday shaqo-ka-guriga hooyooyinka iyo ganacsiyo badan oo internetka ah ayaa soo socda in wax qabadkooduna shaqo-ka-guriga hooyooyinka iyo ardayda iyo suxufiyiinta kale. Haddaba waa inaad tahay wariye ah haddii aad shaqayso ugu badan ama yar sida aad dooni oo si toos ah uga gurigaaga via aad internet-ku xiran computer, iyo sidoo kale lacag ayaa iyada oo loo marayo habab processor bixinta online. Haddaba waa maxay yihiin qaar ka mid ah qodobo muhiim inay ka qayb qaataan guusha sida wariye madax banaan oo shaqo--ka ee guryaha?
i. Calan saacadaha soo saar leh adiga kuu gaar ah: Waa in aad fahamto in halka aad ka shaqayso ka Raaxaysay ee gurigaaga, waa macquul in la dhigay saacadaha soo saar leh marka aad aan doonaynin in la dhibay soo booqda ama si aad u kaxaystay by frivolities iyo TV. Waa inaad dhigay saacadaha soo saar leh oo gaar ah marka laga reebo in taas waa in aad la kulmi shaqadaada haddii aad ku jireen jagooyin joogto ah oo caadi ah, oo laga yaabo in aad u sheegto dadka ku soo booqanayaa aanay si ay u booqdaan at saacadood sababtoo ah aad heshay si ay u helaan hay.
ii. Work jawi sahla: Sida wariye madax banaan oo shaqo--ka ee guryaha, shaqadaada waxaa laga yaabaa qoraal article, VA, xarun wicitaan, transcriptionist iyo barahaaga online kuwo kale. Waxaad u baahan tahay jawi meesha uu ilmahaaga ma noqon doonto mid dhib ku ah iyo meesha aad ka soo uruurin karin shaqadaada iyada oo aan wax xadad qaldaadka. Bal qiyaas telecommuting kaaliye dalwaddii ama xarun wicitaan oo macaamiisha dhamaadka kale ee khadka carruurtaada baroor iyo blaring TV ka maqlaan, waxayna ahayd sanqadhii motorcars ama. Xusuusnow shaqo-ka-guriga suxufiyiinta badan kasban badan oo ka badan mushaharka badan bishii mushaar.
iii. Ha qaniini badan aad calalin karo: Waxaa suurtogal ah in howshooda shaqo, haddii aadan is ogow saabsan Muga xagga shuqullada aad qaadato ku saabsan. Naftaada iyo tayada shaqo aad Waxaad Askar yaabaa gaadhay markii stress bilaabo inuu qaato toll ah aad ku. Bal qiyaas adigoo khaladaad typographical iyo naxwaha in aad shaqo web content qoraal oo kaliya sababtoo ah maskaxda waxaa loo xidhayo ka-shaqada. Inkastoo shaqooyin online iman kara in roonaato iyo in dalabaadka sare, waa in aad aqbala shaqooyin aad tahay oo kaliya oo la hubo ee dhamaystirka aan daynin ay tayada ku xanuunsado, oo aad laga yaabo in xaqiiqda ka fiirsan tigidka marka aad soo galla shaqada aad u badan oo helay loogu dhammeeyo waqtigii.
iv. Xisaab xir xisaabaadka wanaagsan: Haddii aad tahay dagane gudahood Maraykanka, ha iloobin in aad waa in IRS ka bixiyaan cashuurta hadii aad shaqaysato in ka badan $600 sida wariye madax banaan oo sanadba sanadka ka dambeeyo, iyo sidoo kale laga yaabaa in aad u baahan tahay inaad ka jarto kuwa caadiga yar yar qaarkood, inkasta oo aad shaqada guriga. ILAALI xisaabaadka wanaagsan ee dakhligoodu aad, Ilo shaqooyin online, waqtiyada lagu talagalay shaqada, iyo tabs kale oo muhiim ah la xiriira in aad shaqo aad meel u lahaa booska halkaas oo aad ka kaliya dayi doonnaa buugaag dhawaan ay go'aan ka gaari kara booska dhaqaale.
v. Ilo kala duwan oo ka mid ah dakhliga online: Marka aad ka shaqayso sidii wariye madax banaan oo online, inta badan aan laguu soo baxday kaalmada sugidda accruable shaqaalaha ah shirkad caadiga ah. Waxaad aan la soo baxday caafimaadka caymiska, 401faa'iidooyinka k, iyo gunnooyinka shaqada kale oo ka mid ah kuwa kale; waa in aad sidaas darteed loo hubiyo in aad hesho ilo fara badan ee dakhliga online si haddii mid ka mid macmiil ama isha si lama filaan ah iyaduu, waxaad heli kartaa oo ay la socdaan dad kale oo aan la il daran yahay dhaawac kasta oo ay weli wax badbaadiyo waayo, berrito.
Be the first to comment on "Talooyin muhim u tahay guul lagu Sida Freelancer Internet ah"